International Series Archives - Page5of6- YTV
Home » Programs » International Series » Page 5
ရင်ကိုခွဲပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် ဓား… YTV Channel ကို အားပေးနေတဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် “ဓားလောကရဲ့သူရဲကောင်း”အပိုင်း (၂၀) 😱 အပိုင်း(၂၀) မှာတော့ ဓားသိုင်ပညာရှင် တင်းနင်က တခြားလူမှုရေးကိစ္စတွေကြောင့်ရှုပ်ထွေးနေချိန်မှာ မင်းကြီးကတော့ မင်ရှန်းဓားပြိုင်ပွဲကို […]
October 2, 2020 2:49 am
“လူတိုင်းကကြိုးစားနေကြတာပဲ ဒီလောကရဲ့ စင်မြင့်မှာတော့ နေရာယူနိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူး ဖြတ်လမ်းလိုက်ပြီးအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် စိတ်မရှိပါနဲ့ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး..” ကျီရှောင်ကော ဆုံးမဩဝါဒတွေ ဘာလို့ချွေနေပြန်တာလဲ… ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာဦးမလဲ… ပြသမည့်ရက် : ၂-၁၀-၂၀၂၀ (သောကြာ) ပြသမည့်အချိန် : ည (၆) […]
တော်ဝင်ကလဲ့စား အပိုင်း (၅၄)
September 28, 2020 11:35 am
ငြိမ်းချမ်းမှုဟာ အရာအားလုံးကို ပြီးပြည့်စုံစေတာလား…ပရိသတ်တို့အစဉ်အားပေးခဲ့ရတဲ့ တော်ဝင်ကလဲ့စားဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ…. အပိုင်း (၅၄) မှာ ပရိသတ်ကို စိတ်ကျေနပ်စွာဇာတ်သိမ်းပေးနိုင်မလား?…. ဘယ်သူတွေက ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ပြီး ဘယ်သူတွေက ဝမ်းနည်းဖွယ်အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ အဆုံးသတ်ရမလဲ…. စစ်မှန်တဲ့အနိုင်ရရှိခြင်းကို ဘယ်လိုဖော်ဆောင်မလဲ…. ကဲ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းဟာ […]
တော်ဝင်ကလဲ့စား အပိုင်း (၄၉)
တော်ဝင်ကလဲ့စား ဇာတ်လမ်းတွဲက တဖြည်းဖြည်း ဇာတ်ရှိန်မြင့်လာနေပါပြီ… အခုလာမယ့် အပိုင်း (၄၉) မှာတော့ တိုင်းပြည်နန်းတော်ထဲကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ စစ်သူကြီးချောင်ရန် ကို ဘယ်လိုအပြစ်ပေးမလဲ… ? မင်းကြီးအနေနဲ့ရော ကြုံတွေ့လာရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အခက်အခဲတွေအပေါ် ဘယ်လိုရုန်းကန်ကျော်ဖြတ်မလဲ…. ❓ […]
တော်ဝင်ကလဲ့စား အပိုင်း (၄၈)
ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးသမားတော်ဝင်ကလဲ့စား ဇာတ်လမ်းတွဲက တဖြည်းဖြည်း ဇာတ်ရှိန်မြင့်လာနေပါပြီ…အခုလာမယ့် အပိုင်း (၄၈) မှာတော့ ဟန်တိုင်းပြည်နန်းတော်ရဲ့ မိဘုရားအိမ်တော်ထဲကို ညကြီးအချိန်မတော် ရောက်လာတဲ့ စစ်သည်တွေကြောင့် အကုန်လုံး ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ကုန်ပါတယ်… ❓ စစ်သည်တော်တွေ ဘာကြောင့် မိဘုရားအိမ်တော်ကို […]
တော်ဝင်ကလဲ့စား အပိုင်း (၄၇)
September 9, 2020 6:58 am
ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါ အချစ်ကဘေးမှာ တကယ်ရှိလား? ဘဝအမှန်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ မင်းကြီးနဲ့နန်းတွင်းက အရှုပ်အထွေးတွေက ဘယ်လောက်အထိ မြင့်တက်လာခဲ့တော့မလဲဆိုတာက စိတ်ဝင်စားစရာပါ…….. ? အခုလာမယ့် အပိုင်း (၄၇) မှာတော့ မင်းကြီးအဖြစ် ဟန်ဆောင်ထားခဲ့တာကို နန်းတွင်းမှာ သိရှိသွားပြီးနောက် အမတ်ချူပ်ကြီးလည်း […]